FAQ - Dongguan Taiyang Fabric Chemicals Co., Ltd.
Daabacaadda & Dharka
Daabacaadda & Xajmiga
Denim Pulp Dharka iyo Maydhista
Khaas ah oo loogu talagalay Udheerta dhadhanka leh mashiinka dhaadheer
Waxaan nahay warshad.
Aaway warshaddaada? Sidee baan kuu booqan karaa?
Warshaddeenu waxay ku taalaa Dongguan City, oo u dhow Shenzhen, ku soo dhawow inaad na soo booqato!
Miyaa la heli karaa muunad?
Waxaa sharaf noo ah in aan soo bandhigno muunaddaada.
1. In ka badan 23 xirmooyin falcelin iyo nidaam daaweyn bullaacad oo kaamil ah, dhammaan alaabooyinka ayaa u hoggaansamaya heerarka deegaanka.
2. Qalabka waxsoosaarka oo dhameystiran.
3. Awooda R&D adag iyo sheybaarka baarista.
4. OEM si diiran u soo dhowow.
Sidee loo xalliyaa sumadda biyaha ayaa soo baxday kadib dhagxaanta dhagaxa?
haddii si caadi ah loo dhaqo si fiican uma muuqanayso calaamadaha biyaha. Dhibaatadan waa in la xaliyaa inta lagu guda jiro quus.
Habka caadiga ah ee lagu maydho ma u baahan yahay in lagu daro wakiilka kiimikada?
hadaadan ku darin wakiilka kiimikaad ee hanaanka quusashada, rabto inaad isticmaasho heerkul sare ama waqtiga dhaqitaanka inaad quusto. Laakiin haddii aad rabto inaad ku guuleysato saameynta aad rabto, ama aad ku darto walxaha kiimikada sida biyaha quusashada, saameyntu way fiicnaan doontaa.
Xarka jeanska ayaa badala midabka ka dib marka enzyme-ga Classics la dhaqo, maxey tahay xalka?
Waxaad dooneysaa inaad si muuqata u aragto midabka ay xariggu iska beddelaan marka hore haddii ay ka muuqato dheeh. Haddaysan ahayn sidaas, waa suuragal in dharka midabka leh aan la kululayn karin, sidaa awgeed midabkii la beddelay. Haddii aad rabto inaad xalliso tan, ka dib waxaad u baahan tahay inaad hagaajiso midabka xargaha ka hor maydhista.
Sidee loo naaqusayaa hoos udhaca jiirka?
Xaddiga goynta jiiniska ayaa ah mid aad u adag in la xakameeyo, sida caadiga ah marka hore waxay sameyn doontaa dhowr qiyaasood oo kala duwan oo surwaal ah, ka dibna isku day xaddiga burburka kahor tiro badan oo tolo. Laakiin sidoo kale fiiro gaar ah u yeelo dharka jeansiga ee loo adeegsaday, qaar ka mid ah heerka duubista dharka ma aha mid deggan, tani waa in la tijaabiyaa marar badan. Sidoo kale waa muhiim inaad fiiro gaar ah u yeelatid heerkulka loo isticmaalay dhaqista maadaama kaladuwanaanta heerkulka ay sidoo kale saameyn ku yeelan karto heerka burburka. Isla mar ahaantaana, qadarka suufka biyaha ayaa sidoo kale saameyn ku yeelan doona, sida ugu wanaagsan ee loo maydho sida ugu dhakhsaha badan ee suuragal ah tiro dhawr iyo toban alaabo ah, iska hubi inay heerka qiiqaagu halis yahay, haddii ay jawaabtu haa tahay, fadlan la socodsii warshadaha dharka si dhaqso loogu daaweeyo.
Ma ula qabsan karaa heerkulka biyuhu waqtiga waqtiga maydhashada birta ah?
Haa, wey fiicantahay in la isticmaalo maydhashada halsano, maxaa yeelay halsano ayaa ku milmi kara biyaha, intee biyo ah ayaa wax u dhimika fiirsashada halsano, illaa iyo intaad ilaaliso xoogaa xoogaa ah, ku dar walxaha kiimikaad mar labaad, ama aad u isticmaasho waqti dheer si aad u qulqulatid jiiniska dabacsan, latitude yarn. Kuwani waxay ka dhigi karaan habka maydhista mid dheereysa ama gaagaaban.
Ma ahan midab la mid ah kan orudeinal ka dib marka loo maydho jeanska, sidee loo hagaajiyaa dhibaatadan?
Haddii midabku mugdi yahay ka dib maydhashada, waad dhaqi kartaa hal waqti oo dheeri ah. Haddii ay waxyar khafiif tahay, sidoo kale waad ufiiri kartaa mar labaad.
Sidee loo xallin karaa dhibaatadan haddii ay jiraan midabo kala duwan oo isku nooc ah jiinis isku mid ah?
Sababta oo ah maroku wuxuu leeyahay Chroma kala duwan, waxaad u baahan tahay inaad sii waddo midab kala sooca kahor markaadan quusanin, nalku hal mar uun sabuufin kadib markaad xumaato, ka dibna midab kala dhig, Sidaas habkan, waxaad ku ilaalin kartaa inay midab isku mid ah ku yeeshaan xirmo alaab ah. Intaa waxaa sii dheer, haddii aad aragtay dufcaddii ugu horreysay ee alaabtu midabbo kala duwan leeyihiin, waa inaad u sheegtaa warshaddii dharka lagu dhaqo inay midab kala soocaan marka ugu horreysa.
Jeansada jilicsanaanta ka dib marka la dhaqo waxay saameyn ku yeelan doontaa laastikada, sida loo hagaajiyo?
Jirka jeexdinta, haddii midabku noqdo mid khafiifa, ha ka badin wax cadaadin isla markiiba, heerkulkuna yuusan noqon mid aad u sarreeya, ugu badnaan waa inuusan dhaafin 60℃. Muhiimadu waxay tahay in lasii daayo labo jeer si gooni ah si loo ahaado laastikada.
Muxuu jiinisku wali ugu adag yihiin ka dib marka la maydho?
Midda koowaad waa mushkiladda dharka, tan labaadna waa in waqtiga dhaqitaanka uusan ku filneyn, waxaad ubaahantahay inaad dheereysato waqtiga dhaqitaanka hadii aad rabto saameyntu inay ka jilicsan tahay, 3-da waa habka aan dhaqno waxaan u isticmaali doonnaa, hadii waxaan ku dhaqeynaa dhagax ama halsano, Saameynta iyo qadarka labadaba wey kala duwan yihiin. Haddii dhagaxa lagu maydho enzyme, taxanaha dhagxaanta ama enzyme, ama haddii dhagaxu lagu nadiifiyo enzyme gudaha VAT, saameyntu sidoo kale way ka duwanaan doontaa. Sida loo waafajiyo heerka maskaxdaada maskaxda ku haya, waa inaad isku daydaa si aan kala go 'lahayn oo aad naftaada ku darto fikirkaaga, tani waxay sameyn kartaa natiijo fiican.
Jilicsanaanta khamiirka khamiirku ma laxiriirtaa dharkeeda ama waxyaabaha ceyriinka ah?
Dharka ama alaabta ceyriinka ah waa sababta koowaad, sababta labaadna waa habka looga quusto sifiican oo aan loo qaban, waqti la’aanta ayaa umuuqata inay sii adkaaneyso.
Waad ku mahadsan tahay danahaaga iyo ku raaxeysiga aqriskaaga. Adeegyo tayo leh iyo adeegyo kiimiko oo xirfad leh ayaa la bixin doonaa, si daacadnimo leh u soo dhowow la-tashigaada iyo taladaada!
MA U BAAHANTAHAY INAAN LA SHAQO
Alaabada kulul - Khariidadda Goobta - AMP Mobile
Estate Industrial Estate, tuulada Huangjingkeng, Magaalada Huangjiang, Magaalada Dongguan, Gobolka Guangdong, Shiinaha, 523760